फेब्रुअरी १४ अर्थात् ‘प्रेम दिवस’ आज ! – Sodhpatra
फेब्रुअरी १४ अर्थात् ‘प्रेम दिवस’ आज !
गुलावको फूल ले भावनालाई प्रतिविम्बित गरीदै
प्रकाशित : २ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०८:२२ February 14, 2021
काठमाडौं : विश्वभर फेब्रुअरी १४ तारिखका दिन भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा पनि केही वर्षयता प्रेम दिवसलाई युवा युवतीले विशेष चाडकै रूपमा मनाउन थालेका छन् । यो दिवसले सहरी समाजमा त नयाँ संस्कृतिकै रूप लिएको छ। यसवर्ष कोरोना महामारीका कारण विश्वमा भ्यालेन्टाइन डेको पछिल्ला वर्षहरुमा जस्तो उत्साह छैन्।
भ्यालेन्टाइन डेको सुरुवात इस्वी संवत् २६९ मा रोमनबाट सुरु भएको हो । सैनिकले नारीसँगको सम्बन्धका कारण कमजोर हुने आभास गरेपछि सम्राटले प्रेम र विवाहमा रोक लगाएका थिए। तर रोममा भ्यालेन्टाइन नाम गरेका पादरीले सम्राटको त्यो अभियानलाई सार्वजनिक रूपमै उल्लङ्घन गर्ने घोषणा गरे।